I-cellulite kumaxesha kaRubens yayicatshulwa njengesibonakaliso sobuhle kunye nempilo yowesifazane, yabonwa ngabantu njengamandla okwenza umfazi. Kwihlabathi lanamhlanje, le nto ibonakala ngendlela echaseneyo.
Ngaphezu koko, i-cellulite ayithinteli kuphela i-sibini kuphela kwabasetyhini abashumi, kodwa ngamnye umntu wesine. Abanye oogqirha bakholelwa ukuba isifo esinjenge "cellulite" asinakho nje, ukuba i-cellulite isisayini sesibini sesini nawuphi na umfazi, kwaye ukukrazula oko akunakwenzeka. Mhlawumbi kunjalo, kodwa unokuyinciphisa kwindawo encinci. Ukulahla i-cellulite yinkqubo enzima njengendlela yokutya okunomsoco, ukugcina imithetho elula yokuphila ngendlela enempilo, ukuzivocavoca kunye nemfundo yempilo, ukusilalisa, iindlela zokusasaza kunye nokusetyenziswa kwezimonyo ezahlukeneyo.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ukwazi indlela yokutya ngokufanelekileyo ukukrazula i-cellulite akunazi nto kunye neesidlo ezenzelwe ukulahla ubunzima obunzima. Uninzi lwabasetyhini abanesisindo esifanelekileyo bahlupheke kuso kungaphantsi kwama-fatties. Esinye sezimbangela ze-cellulite sinokungalingani kwimizimba emzimbeni, kwaye ukutya okuninzi kunabantu abanomthwalo ophezulu kunenjongo yokukhupha umzi ophuma emzimbeni. Ukulahla nokukhusela i-cellulite ngemini, kufuneka uphuze ubuncinane i-1.5 ilitha yamanzi. Esi siqhelo kubandakanya amanzi: kungcono ukuyisebenzisa ngokufudumeleyo, akukho mzekelo ungasebenzisi amanzi ngegesi; itiye: makube luhlaza kunye noshukela; amajusi asanda kufakwa, okuthiwa "amatsha".
Ukuba ityuwa kunye neziqholo akudingeki ukuba zifakwe ngaphandle kokutya ngokupheleleyo, ngoko ushukela kunye nesitashi kufuneka zilahlwe ngokupheleleyo. Ngaphezu koko, ushukela akusiyo kuphela i-candy, ithokoleta, kunye nokunye okuninzi, yongezwa kwimveliso eyahlukeneyo yee-semi-finished products, kwaye i-juice ehlanganisiweyo imane nje isuka kumxholo wayo. Yingakho kungcono ukulungiselela i-juice uze uphuze ngaphakathi kwemizuzu engama-15 emva kokulungiselela. Isitashi sithengiswa njengento enobungakanani kwimveliso eyahlukeneyo, funda ngokucophelela oko ufumene kwiivenkile. Musa ukutshatyalaliswa ngabasemagqabini. Iingcali zenzululwazi ziye zabonisa ixesha elide ukuba zinegalelo ekuphuhlisweni komhlaza. Ukuba awukwazi ukwenza ngaphandle kweshukela, sebenzisa ubusi bendalo. Ngetyuwa kunye neziqholo, abayi kulimaza kwimingcele efanelekileyo, kuphela ityuwa ukuzama ukusebenzisa umquba omkhulu, akuyona ingozi kakhulu.
I-Cellulite "ithanda" iisoso, imveliso yokutshaya, inyama enamafutha: ingulube, imvana, inyama yodada. Ukuba awukwazi ukunqanda ukutya inyama, sebenzisa i-veal, inyama yenkomo, i-porgors ephantsi, kunye nokupheka inkukhu, sebenzisa kuphela amabele kwaye udle kuphela ngemifuno, kungekhona ngezolimo kunye neetatate. Kodwa ukusuka kumasikeji kungcono ukuyeka ngokupheleleyo. Into abangenayo: ushukela, ityuwa, iziqholo, isitatshi, i-egg powder okanye i-melange, i-semolina, ubisi lwebisi, izithako zokufakelwa kunye nezilondolozo, kwaye le nto yincinci encinci yezinto abanokubeka, inxalenye encinci yenyama.
Izityalo ziwusizo ze-carbohydrate, kwaye ukuba awufuni ukuwagatya, gcina ukhumbula ukuba banokudibaniswa kwakhona kuphela nemifuno. Nika ishizi, izondlo zilinganise ngokutshaya, kwaye iqukethe inani elikhulu leekhalori. Inobungozi kwikhofi yezempilo, ephosa i-calcium emzimbeni, utywala kunye ne-nicotine. Ikhofi inokutshintshwa kunye neentlobo zekhofi ezivela kwibhali kunye nesiselo esiphuzwayo se-chicory. Iimveliso zobisi kufuneka zikhethwe i-fat-fat, kodwa kungcono ukusebenzisa iimveliso zobisi ezibuncu kuphela kunye ne-cottage cheese engenamafutha.
Wonke umntu uyazi malunga neengozi zokutya okukhawulezayo, kodwa ke, bathenga ukutya okunjalo imihla ngemihla. Akunjalo kuphela okutyayo - enye yeentshaba ezibalulekileyo zesondlo esifanelekileyo, i-hour-extra snacks kunye ne-dog-food! Ngaba ulambile phakathi kwezidlo eziphambili? Kule meko, ukwanelisa indlala kunye neziqhamo, ziqukethe i-fiber kwaye zizalise umzimba ngokungahambi kwe-potassium. Umgaqo osisiseko wemfazwe kunye ne-cellulite kukutya okunokulinganisela, ukutya kwansuku zonke kufuneka kuqulethe zonke iimaminerali ezifunekayo, ii-vithamini, i-fibre, i-carbohydrates efanelekileyo, iiprotheni. Ngokomzekelo, awukwazi ukusilahlela ngokupheleleyo isonka se-rye, kuba iphela iqukethe ii-vithamini ezingabonakaliyo ngokupheleleyo, kukuphela nje ukuba kufuneka uthenge isonka kwaye udinga malunga ne-30-40gr ngosuku.
Ukuzaliswa komzimba kunye ne-slag kunye neesxibesi esinye isizathu sokubonakala kwe-cellulite. Kule meko, unokulungiselela ukulayishwa kweentsuku kunye nokucoca umzimba. Khumbula ukuba umzimba kufuneka uhlanjululwe kuphela phantsi kolawulo logqirha. Kodwa iresiphi yokucoca umzimba ukusetyenziswa kwansuku zonke: ingilazi yefuthe elifudumele elinohlaza ngaphandle kwentshukela ekuseni kusasa esingenalutho ngaphambi kokutya.
Xa udla, ungaphuzi ukutya kunye namajezi, ubisi, i-kefir kunye namanzi. Kungcono ukusela iglasi yamanzi kwiqondo lokushisa lokulala ngaphambi kokutya. Le ndlela izakukhusela ekudleni kunye nokuzalisa umlinganiselo wamanzi. Yaye uzame konke ukutya okunzima kakhulu: inyama, okusanhlamvu, iisuthi, amakhowe, njl. cwangcisa kwimenyu kude kube ngehora lesithathu ntambama, njengoko kuthatha malunga neeyure ezingama-4 ukuyila, kwaye emva kwe-18.00-19.00 akukho nanye.
Ngokwahlukileyo, kuyimfuneko ukukhankanya ukulwa notshaba lwabafazi bonke, i-cellulite, ngexesha lokukhulelwa nangemva kokuzalwa komntwana. Kulezi zihlandlo zibini, akukho nto unokuyihlamba umzimba kwaye uhlale kuyo nayiphi na ukutya. Kwimeko yokuqala, unokulimaza kakhulu umntwana ozayo, kwaye ngokubaluleke kakhulu, ukuba ngaphambi nangemva kokubeleka, ngexesha lokuncelisa, ibhinqa elisemzimbeni lithatha utshintsho lwe-hormonal. Into kuphela enokuthi iphelelwe kule mihla yimixholwana engaphezulu kwekhalori yokutya kwaye iqinisekise ukuba zonke izithako ezincedo zikhoyo ekudleni. Ngendlela, loo mveliso uncedo nje ngokuba itiye eluhlaza inokuphikisana okunye: akunakunxila kwabasetyhini abakhulelweyo. Leli qela le-green tea kuphela elidala ukuphuhliswa kwe-oncology. Bonke abanye, kungakhathaliseki ubudala kunye nohlobo lwezifo, i-tea eluhlaza iboniswa, kwaye yenza njenge-antioxidant eqinile-umchasi womhlaza. Kodwa xa ukondla, itiye eluhlaza yandisa ukwanda kwaye ayibangeli ubundlobongela, ngoko ayibuhlungu umntwana, uyayiphuza ekuseni kusasa.
Hlanganisa ulwazi malunga nendlela yokutya ngokufanelekileyo, ukukrazula i-cellulite ngemikhwa efanelekileyo, indlela yokuphila esebenzayo, ukuyeka utywala kunye ne-nicotine, kwaye akudingeki ukuba ulinde ixesha elide.
Ukugqithisa ibhulukwe ekulahlekeni kwesisindo
Umxube weMeko waseMexico
Yenza i-Halloween yethu yokwenza abantwana kunye nabadala
Iinkalo eziqhelekileyo eziqhelekileyo
I-Carpal Tunnel Syndrome: Zincede
I-Alaska pollack kwi-microwave